Ukubikezela i-Next Geologic Ice Age
Ngaba i-Ice Age ezayo?
Imozulu yomhlaba iguquke kakhulu kwiminyaka engama-4.6 yezigidi zeembali zeplanethi yethu kwaye kulindeleke ukuba imozulu iya kuqhubeka itshintshe. Enye yemibuzo ekhangayo kakhulu kwisayensi yenzululwazi kukuba ingaba ixesha lemiqhaqha liphelile okanye ngaba siphila "kwindawo engalinganiyo," okanye ixesha eliphakathi kwamanzi emvula?
Isikhathi se-geologic esiphila kuso siyaziwa ngokuba yiHolocene.
Le nkalo yaqala malunga ne-11 000 kwiminyaka eyadlulayo eyayikuphela kwexesha lokugqibela lokugqitha kunye nokuphela kwexesha lePleistocene. I-Pleistocene yayiyixesha lexesha elipholileyo elinobuqhophololo kunye nokufudumala kwamaxesha aphakathi okuqala malunga nee-1.8 million zeminyaka edlulileyo.
Ekubeni i-glacial period ebizwa ngokuba yi "Wisconsin" eMntla Melika kunye ne "Würm" eYurophu xa iikhilomitha ezili-10 eziziikubhite eziqhelekileyo zeMntla Melika, i-Asiya kunye neYurophu zagqitywa ngumkhenkce, phantse yonke iqhwa Iimakhishithi ezigubungela umhlaba kunye namaqabunga kwiintaba ziye zabuya. Namhlanje malunga neepesenti ezilishumi zomhlaba zigqitywa yiqhwa; I-96% yale qhwa i-Antarctica neGreenland. Iqhwa le-Glacial likhoyo kwakhona kwiindawo ezinjenge-Alaska, eCanada, eNew Zealand, e-Asia naseCalifornia.
Njengeminyaka eyi-11 000 kuphela idlulileyo ukusuka kwi-Ice Age yokugqibela, izazinzulu azikwazi ukuqiniseka ukuba ngokwenene siphila kwi-Holocene emva kwexesha elidlulileyo lePleistocene kwaye ngenxa yelinye i-ice age in the geologic.
Ezinye izazinzulu zikholelwa ukuba ukwanda kweqondo lokushisa kwehlabathi, njengokuba sibhekane nelo xesha, kunokuba ngumqondiso wexesha elizayo leqhwa kwaye ngokuqinisekileyo kunokunyusa inani leqhwa emhlabeni.
Ingqele, umoya omile ngaphezu kwe-Arctic ne-Antarctica inomfutho omncinci kwaye ihlasele ikhephu emimandla.
Ukwanda kweqondo lokushisa kwehlabathi kunokwandisa inani lokunyameka emoyeni kwaye kwandiswe inani lemvula yekhephu. Emva kweminyaka emininzi yekhephu kunokuba idibanise, iindawo eziphambili ze-polar zingakwazi ukuqokelela iqhwa. Ukuqokelela kweqhwa kuya kubangela ukuhla kwezinga lezilwandle kwaye kuya kubakho ngaphezulu, utshintsho olungalindelekanga kwimozulu yemozulu yehlabathi.
Imbali yethu emfutshane emhlabeni kunye nengxelo yethu emfutshane yemozulu isenza singakwazi ukuqonda ngokupheleleyo impembelelo yokufudumala kwehlabathi. Ngaphandle kokungathandabuzeki, ukunyuka kwamaqondo okushisa komhlaba kuya kuba nemiphumo emibi kubo bonke ubomi kulo mhlaba.
Indlela yokuvavanya i-Cherokee Coolant Sensor kunye neWiring
Imimangaliso kaYesu: Intlanzi Ukuthatha Isimangaliso Emva kovuko
IziFrentshi zesiFrentshi kwiNgesi yesiNgesi Ukutyelela
Iindlela ezine zokunciphisa iDragestyle